Hoover Dam | manka kura
« कहिले अाउला ?
डाक्टरकेा सम्मान »
केाठावाट निस्कदा हाम्रेा यात्रा केवल Grand Canyon केा मात्र थियेा । तर वाटेामा जांदा जांदै यात्रा अरू पनि तय भयेा । केाठावाट हामी शुक्रवार सांझतिर निस्केका थियैां । हामीसंग अाइतवार सम्मकेा घुम्ने समय थियेा । त्यसेा भएकेा हुनाले हामीले अाएकेा वेलामा Las Vegas र वाटेामा पर्ने Hoover Dam पनि पुग्ने येाजना तय भयेा । पहिलेकेा हाम्रेा कार्यक्ममा परिवर्तन भएकेाले हामी Grand Canyon मा धेरै समय वसेनैा ।
सगरमाथाकेा देशमा जन्मे पनि मैले अाजसम्म हींउ देखेकेा र चलाएकेा थिइन । Grand Canyon पुगेरपिछ हींउसंग खेल्न र हीउंमा दैाडन पाए । उतावाट फर्कदा सडक तथा गाडीवाट देखिने सवैठाउंमा सेता हींउका थुप्राहरू घामकेा उज्यालेाले अझ सेता भएर चम्किरहेका थिए । हामी त्यसठाउंवाट दश वजेतिर हिंडेका थियैां हेाला , Hoover Dam अार्इपुग्दा झन्डै एक दुर्इ वजेकेा हुनुपर्छ । धागेाकेा तानजस्तेा दुर्इ तीन लेनकेा एकतर्फी वाटेामा सत्तरी असी मार्इलकेा गतिमा गाडी गुडेकेा थियेा ।
Hoover Dam ,Colorado River माथि Dam वनाएर ठूलेा ताल वनार्इएकेा रहेछ । सेाही तालकेा पानीलार्इ चटृान काटेर विशाल छाङगेा खसार्इ त्यसवाट विजुली निकालीएकेा रहेछ । Hoover Dam विश्वकै सवैभन्दा ठूलेा मानव निर्मित अनैाठेा र सुन्दर रहेछ । यस Dam वाट Irigation र यसवाट निस्किएकेा विजुली मध्ये 56 % Southern California, 19% Arizona र 25% Nevada State ले प्रयेाग गर्देा रहेछन् । Hoover Dam ,Nevada र Arizona State केा सीमानामा पर्देा रहेछ ।
Hoover Dam केा नाम पहिले अर्कै रहेछ पछि यसकेा नाम ३१ अैा अमेरिकी रास्टपति Herbert Hoover केा नामवाट राखिएकेा रहेछ । Hoover रिपव्लीकन पार्टीवाट विजयी भै (मार्च ०४,१९२९ देखि मार्च ०४,१९३३ सम्म) अमेरिकाकेा रास्ट्रपति भै काम गरेका रहेछन् । Colorado नदीमा Dam वनाउने र यसवाट विजुली निकाल्ने काम अप्रिल २०,१९३१ मा शुरू भै मे २९,१९३५ मा सम्पन्न भएकेा रहेछ ।
हाल उक्त स्थान नजिकै Dam केा दक्षिणा तर्फ Hoover Dam Highway वन्न लागिरहेकेा छ । उक्त प्रेाजेक्ट जुन २०१० मा सम्पन्न हुने वतार्इएकेा छ । Nevada र Arizona दुवै तर्फ सडक वनिसकेकेा रहेछ । Colorado River भन्दा नैा सय फिट माथी वन्न लागेकेा त्येा पुल अचम्म लाग्देा छ । कहालि लाग्देा छ । इन्जिनियरहरूकेा साहसी तथा कामकेा प्रशंसा गर्नै पर्छ । दुवै डांडावाट गेालाकारमा उठेर अाकाशमा कंक्रिट ढलान भै रहेकेा छ । दुवै तर्फवाट ढलान हुंदै गै रहेकेा भाग जेाडिएपछि सडक र दुर्इ हजार फिट लामेा पुल एकसाथ वन्ने छ । त्यस पुलवाट गाडी चलिसकेपछि तल हेर्दा एउटा अर्केा अाश्चर्य लाग्ने छ ।
Nevada state ले यस क्षेत्रलार्इ पर्यटक क्षेत्रकेा रूपमा विकास गरि रहेकेा देखिन्छ । विजुली र सिंचाइकेा कार्य मात्र नभै यस Dam लार्इ पर्यटकीय स्थल केा रूपमा विकास गरि अाय अार्जनकेा राम्रेा श्रेात State ले वनाएकेा छ । यस्ता थुप्रै क्षेत्र हामीकहां पनि नभएका हेाइनन् केवल सेाच र येाजनाकेा खांचेा रहेकेा छ । काठमाडैावाट नजिकैकेा कुलेखानी विद्धुत येाजनाकेा विशालताललार्इ माछा मार्ने, डुङगा चलाउने, विद्धुतगृह अवलेाकन गर्ने कार्यक्रम वनाउन सकिन्छ । यसवाट अार्थिकेापार्जनकेा साथै स्थानिय क्षेत्रमा पनि केही रेाजागारी र अाय अर्जनकेा वाटेा खुल्न सक्छ । त्यसैले देशमा वनेका कयैा यस्तै क्षेत्रहरूलार्इ पनि वहुअायामिक दृस्टीले संचालन गर्न सके वाह्रय तथा अान्तरिक पर्यटकवाट अायअार्जनकेा राम्रेा माध्यम हुन सक्देा रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
प्राय मानिसहरू Las vegas, Hoover Dam र Grand Canyon केा Package Program वनाएर पुग्दा रहेछन्र । हाल एक दिनमा करिव २० हजार गाडीले Hoover Dam वारपार गर्छन् । विजुली उत्पादन भएकेा क्षेत्रकेा अवलेाकन , पानीकेा विशाल छाङगेा हेर्न, धेरै मानिसहरू लिफ्टवाट तल सम्म पुग्ने गर्दछन् । फेाटेाहरू खिच्ने, मानव निर्मित कहालिलाग्देा चटृान काटिएकेा भाग हेर्दा सीरकेा टेापी खस्ला जस्तेा हुंदेारहेछ ।
त्यहा अाउने पर्यटकहरूका लागि गाडी पार्क गर्न घरभित्रै तला तल्लामा पार्क गर्न सकिने गरि मिलाइएकेा रहेछ । प्रतिवर्ष सातअाठ लाख मानिसहरू यस क्षेत्रमा Fishing,boating, swimming, hiking, camping र sight seeing गर्न अाउने रहेछन् । यस अलावा त्यस क्षेत्रकेा पुरै अवलेाकन चालिस डलर तिरेर हेलिकप्टरवाट गर्न पार्इदेा रहेछ ।
Hoover Dam वाट ३० माइल गएपछि Nevada State केा Las vegas फेरी अर्केा अाफैमा विचित्रकेा शहर पुगिदेा रहेछ। जुन शहर विशेषत सुरा, सुन्दरी र जुवाकेा लागि प्रशिद्द् रहेछ । यस वारे अर्केा टांसेामा लेख्ने छु । अस्तु ।
ल्हेासार पर्व र नयां वर्ष सन् २०१० केा सवैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित जय व्लग ।
This entry was posted on डिसेम्बर 29, 2009 at 4:24 बेलुका and is filed under वालकथा.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Hoover Dam”
जनवरी 6, 2010 मा 4:46 बेलुका | जवाफ फर्काउनुहोस्
यात्रा संस्मरण रमाइलो छ , Grand Canyon को ’boutमा पनि लेख्नु होला त्यो संग पनि यौटा बैज्ञानिक रहस्य छ,जुन सबै जीबनसंग सम्बन्ध राख्दछ